Somalia In The Year 2026
Ilaa Iyo Sanadka 2026ka, Ilaa Ay Ku Tarmaan Oo Xoog Iyo Baaxad Ku Yeeshaan Ajnebiga Iyo Amisom Waddanka Somaliya, Distoorka Somaliya Lagu Qeexi Maayo Shuruudaha Somalinimada Iyo Diinta Dadka Soomaliyeed.
Faanoole fari kama qodna waa odhaah Soomaaliyeed oo loo isticmaalo wixii aan dhamaad lahayn. Arinta Soomaaliya ayaa ah Faanoole Fari Kama Qodna.
Puntland iyo Somaliland (Isaaq iyo Harti Daarood) gorodda ayay iskula jiraan, Sool iyo Sanaag bari ayaa xuddun u ah khilaafkooda, 23 sano ka dib weli xal ma muuqdo.
Koonfur Galbeed (Raxan Weyn) waxay dooratay laba madaxweyne oo iska soo horjeeda. Inta la og yahay wiil 16 jir ah ayuu galaaftay murankaasi.
Waxa weli la sugayaa sida Jubbaland (Ugaadeen iyo Mareexaan) uga jawaabto doorashada madaxweyne Madoobe Nuunow (Raxan Weyn) oo la yiri waa madaxweyne lix gobol xukumi doona oo Kismaayo ku jirto.
Shabeelaha Hoose oo labada maamul ee Baydhabo laga dhisayba tirsanayaan waxaa dhowaanahan ku dagaalamayey laba qabiil (Biya Maal iyo Habar Gidir), lamana oga inay ogolaan doonaan inay Baydhabo wax ku darsadaan iyo in kale.
Ximan iyo Xeeb (Saleebaan/Habar Gidr) iyo Gal-Mudug (Sacad/ Habar Gidir) inkastoo ay Gelinsoor ku kala saxiixdeen heshiis wadahadal hadana weli arinta Hobyo oo labada geesoodba sheegtaan waa laysku khilaafsan yahay. Ahlu Suna oo iyana deeganadaas awood ku leh ayaa sheegaya inay maamulaan Caabudwaaq (Mareexaan) ilaa Martabaan (Caydh/Habr Gidir) taasoo maamulka Ximan iyo Xeeb iyo Ahlu Suna isku khilaafsan yihiin.
Marka laga soo tago isqab-qabsiga maamuladda waxaa jira dhibaatooyin kale oo aan xalintooda beryahan loo fadhiyin. Alshabaab weli waa dagaalamayaan, hubkoodii iyo naftoodiiba waxay u keydsadeen dagaalo danbe, waxaana taas cadaynaya sida ay uga baxaan magaalo kasta iyagoon ku dagaalamin.
AMISOM waxaa laysla dhexmarayaa in la siiyey ogolaansho ay Soomaaliya ku joogaan ilaa 2026ka, hadii loo baahdona loo cusbooneysiin doono.
Waxaynu wax badan maqalay gabdho Soomaaliyeed oo u cararay Uganda iyagoo ka baqaya in la dilo ka dib markii ay caruur u dhaleen askarta Ugaandha ee Xamar joogta. Waxaad sawirtaa AMISOM oo ilaa 2026ka joogta Soomaaliya, waxay ku doodi doonaan caruurtayada oo minority ah ama laga badan yahay ayaan ilaashanaynaa. Waxaa arintaas u sahlaya dastuurka la yiri baarlamaanka ayaa ansixiyey laguma sheegin qofka Soomaaliga ah wuxuu yahay, waxa lagu dhaafay guddi baarlamaanka ka tirsan ayaa loo saari doonaa.
Dastuurka waxaa kaloo lagu qoray qofku diintiisa waa u xor. Sawaaxiliga hadda ku dhalanaya Soomaaliya ayaa loo sii salaxayaa isagoo Kiristaan ah inuu wadanka kula lahaado.
Taariikhda ayaa ina baraysa in haddaan hadda laga tashan hadhow meel dheer laga dooni doono. Dalka Malaysiya waxaa ku noolaa qoomiyadda Malay, laakiin hadda waa kala badh tirada dadka wadankaas. Waxaa intaa dheer in dadka soo galootiga ahi la wareegaan dhaqaalaha, waxbarashada iyo marmar xitaa hogaanka siyaasadda. Malaysia iyo South Africa oo keliya maaha wadamada dad kale lagu beeray adduunka.